Puntland oo taageertay baaqa Aqalka Sare, dhaliil xooggana u jeedisay madaxda dowladda federaalka – Kalfadhi
Puntland oo taageertay baaqa Aqalka Sare, dhaliil xooggana u jeedisay madaxda dowladda federaalka
War-saxaafadeed kasoo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in ugu dambeyn la qabto 20-ka bishan June shirka looga tashan doono hannaanka lagu geli doonno Doorashooyinka Qaran ee 2020/201.
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, ayaa xalay sheegay in uu magacaabayo guddi uu isagu hoggaaminayo, guddigaasi oo ka shaqeyn doona isu-keenista madaxda labada heer dowladeed iyo qabsoomidda shir looga tashan doono hannaanka lagu geli doonno Doorashooyinka Qaran ee 2020/201, si loo helo hab iyo hannaan raalli la isaga yahay oo doorashada lagu gallo.
Puntalnad ayaa madaxda dowladda-federaalka ku eedeysay in aysan wali kasoo jawaabin gogoshii ay Puntland u fidisay dowladda federaalka iyo maamul-gobolleedyada, gogoshaasi oo ka dhalatay shirkii wadatashiga Puntland ee march 15-17 sannadka 2020.
Puntalnad ayaa sidoo kale ku eedeysay dowladda federaalka in ay ka cagajiiday in madaxweynaha Puntland uu booqasho gogol xaar ah ku tago magaalada Mogadishu si looga wada hadlo qabsoomidda gogosha Puntland ay fidisay. Dowladda ayey sidoo kale ku eedeysay in ay si ula kac ah u marin habaabineyso qabsoomida doorashada.
Dowladda Puntland ayaa soo dhoweysay baaqa Aqalka Sare ee ah in la qabto shir-wadatashi ah iyo in Aqalka Sare guddi u qabteen qabashada shirkaasi.
Puntaland ayaa sheegtay in ay garowsantahay in madaxda maamulka federaalka ah ay ku fashilmeen hirgellinta halbeegyadii masiiriga ahaa sida qabsoomidda doorasho hal qof iyo hal cod ah.
Golaha Shacabka oo maanta yeelanaya kulankoodii ugu horeeyay ee Kalfadhiga 7-aad